संगठित अपराधमा कलाकार | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ जेष्ठ २९ गते प्रकाशित, l २२:४९
आनी देखि सुदर्शन
चलचित्र नायिका रेखा थापाले सुदर्शनसँग आफूलाई जोडेर खस्किएको लोकप्रीयता बढाउन खोजिन् । सुदर्शनसँग अफेयरको चर्चाले बजार तात्तियो । सस्तो लोकप्रीयता टिकेन । सुदर्शन नायकबाट खलनायकमा गनिए । मानव तस्करीको संगठित गिरोहका नाइके रहेछन् उनी ।
अमेरिका र क्यानडा लाने भन्दै नेपाली युवायुवतीसँग पैसा लिएको पत्ता लाग्यो । क्यानडा बस्दै आएका गौतममाथि इन्टरपोलले रेड कर्नर नोतिश जारी गरेको छ । उनी इन्टरपोल सदस्यराष्ट्रमा जहाँसुकै पक्राऊ पर्न सक्छन् ।
कुनैबेला नेपाली फिल्ममा खलनायकमा एकछत्र राज गरेका खड्गी वास्तविक जीवनमा समेत खलनायक भए । कोरियामा डकुमेन्ट्री बनाउने भन्दै ११ नेपाली लिएर गएका थिए । सबैलाई उतै छाडेर फर्किएपछि कोरियाली दूतावासको उजूरीका आधारमा पक्राऊ परे ।
खड्गीविरुद्ध अदालतले फैसला गरेपछि जेल चलान भएका छन् । उनी केन्द्रीय कारागारमा छन् ।
हलिउड र बलिउडमा संगठित अपराधीका नाइकेहरुको प्रभाव छ । बलिउडमा दाउद इब्राहिम र छोटा राजन समूह हर्ताकर्ता रहेको चर्चा कुनैबेला चलिरहन्थ्यो । दाउद, राजन र छोटा सकिल जस्ता अन्डरवल्र्ड डनहरुको नाम चलेका नायिकाहरुसँग प्रेमसम्बन्ध समेत चल्यो । दाउदले नायिका मन्दाकिनीसँग विवाह गरे ।
नेपालमा पनि कलाकाहरुको आपराधिक गतिविधि सतहमा आउन थालेको छ । संगठित अपराधको गिरोहले कलाकारहरुलाई दुरुपयोग त गरिरहेका छैनन् ? एकपछि अर्को गरी चर्चामा आएको घटनाले यस्तै संकेत गर्दछ ।
दुनियाँलाई सकारात्मक बन्न सन्देश प्रवाह गरेकाहरु नै नकारात्मक गतिविधिमा संलग्न हुँदा समाजले कस्लाई पत्याउने ? को सही को गलत ? सर्वसाधारणका लागि विश्वास गर्न कोही लायक नहुने अवस्था बन्न पुगेको छ ।